Posted by Kyaw Htoo Aung at 7:27 AM2comments Links to this post
Posted by Kyaw Htoo Aung at 9:09 AM0comments Links to this post
Posted by Kyaw Htoo Aung at 8:56 AM0comments Links to this post
Posted by Kyaw Htoo Aung at 7:58 AM0comments Links to this post
ဒီမိုကရေစီ စနစ် ရင်သန်ထက်မြက်ဖို့အတွက် အဆိုပါစနစ်အောက်က ပြည်သူများသည် အနည်းဆုံးအခြေခံအသိပညာ (စာတတ်ခြင်းထက် ပညာတတ်ရမည်) တတ်ဖို့ လိုသည်ဟု ပညာရှင်များ ပြောသည်ကို မှတ်သားဖူးသည်။
ယင်းသို့ ပြောသဖြင့် လူဆဲခံရသည်များလည်း ကြုံဖူးသည်။
ပညာမရှိသူများကို နှိမ်ချပြောဆိုသည် ဟု ထင်ကြသည်။ ဒီမိုကရေစီဖွံ့ဖြိုးစ နိုင်ငံများတွင် ကြုံရသည်များကို မေ့နေကြသည် (သို့) မသိကြပေ။
ဒီမိုကရေစီ သည် လိုတရ ဖန်းဆင်ရှင် စနစ်မဟုတ်ပေ။ စနစ်နှင့်အတူ၊ မူနှင့်အတူ လူများလည်း အသီးသီးပြောင်းလဲကြရသည်။ စနစ်တစ်ခုကို ပြောင်းလဲသည်မှာ မြန်နိုင်သော်လည်း (တကယ်တမ်း မပြောင်းချင်ပဲ ပြောင်းယောင်ဆောင်လျှင် နှေးကွေးသည်မှာလည်း အမှန်ပင်။) လူအများ၏ စိတ်နေစိတ်ထားကို ပြောင်းလဲရန်မှာ နှစ်ကာလ ရှည်လျားလွန်းတတ်သည်။ အများ မမြင်ကွယ်ရာတွင် လမ်းပေါ်အမှိုက်ပစ်ခြင်းများ ရှောင်ကြဉ်တတ်ကြပြီလား။ တိုက်လှေကားထစ်ထောင့်များတွင် ကွမ်းတံတွေးပစ်ခြင်းများ ရပ်ကြပြီလား။ ဖေ့ဘုတ်ပေါ်တွင် အကောင့်အတုများဖြင့် ဖရိုဖရဲ ပြောဆိုရေးသားခြင်းများ ဆင်ခြင်ကြပြီလား မေးကြည့်ချင်သည်။
တရုတ်ပြည်ကြီး၏ လက်အောက်သို့ ကျရောက်ကာ တင်းပြည့်ဒီမိုကရေစီ ဆုံးရှုံးသွားသော ဟောင်ကောင်ဒေသခံများသည် ကွန်မြူနစ်ကြိုးကိုင်စနစ်အောက်တွင် နေကြရသော်လည်း မိရိုးဖလာဒီမိုကရေစီခံယူချက် အရင်းခံများကြောင့်
ပြည်ကြီးတရုတ်များထက် အရာရာတွင် သာကြသည်။ သတင်းလွတ်လပ်ခွင့်နှင့် လွတ်လပ်စွာ ပြောဆိုခွင့်များကို ကာကွယ်သကဲ့သို့ ပြည်ကြီးတရုတ်များထက် စည်းကမ်းရှိကြသည်။
ဂျပန်ပြည်ကို ဆူနာမီရိုက်သောအခါ ဂျပန်ပြည်သူများ ဒုက္ခအတိ၊ စိုးရွံ့မှုအတိနှင့် နေကြရသည်။ ရက်သတ္တပတ်အတော်ကြာအောင် အစားအစာများ ရှားပါးမှုကြောင့် ကုန်စုံဆိုင်များတွင် တန်းစီဝယ်ကြရသည်။ သို့သော်လည်း ဂျပန်လူမျိုးများသည် တစ်ဦးကို တစ်ဦး တွန်းခြင်း၊ ရုန်းရင်းဆန်ခတ်ဖြစ်ခြင်း စသည့် လက္ခဏာများကို မဖော်ပြပဲ စနစ်တကျ စီတန်းကာ မိမိအလှည့်ကို စောင့်၍ ဈေးဝယ်ကြသည်။ အရေးတကြီးအချိန်မှာတောင် ငါလိုတာ ယူမည်ဆိုပြီး ထင်တိုင်းမကြဲခဲ့ကြပေ။
သို့သော် ပစိဖိတ်သမုဒ္ဒရာ၏ တခြားတစ်ဘက် တရုတ်ပြည်တွင်မူ ဂျပန်ပြည်မှ ရေဒီယိုသတ္တိကြွဓာတ်များ ရွေ့လျားလာနိုင်သည်ဟု စိုးရိမ်မှုဖြင့် စတိုးဆိုင်များတွင် လူအများ ဆားထုပ်များကို တွန်းတိုးကာ
လုဝယ်ကြသည် ကို တီဗွီများတွင် တွေ့ရသည်။
အရာရာကို ချင့်ချိန်စဉ်းစားဆုံးဖြတ်နိုင်မှုစွမ်းအားသည် အတန်းပညာအပြင် အတွေ့အကြုံ၊ စာကောင်းဖတ်နိုင်စွမ်း၊ ခေါင်းအေးထားနိုင်စွမ်း၊ ခြုံငုံစဉ်းစားနိုင်စွမ်းများပေါ်တွင်လည်း အများကြီးမူတည်သည်။ ပြဿနာတစ်ခုကို သုံးသပ်ရာတွင် မိမိလိုရာဆွဲခြင်း (subjective) ထက် မျှမျှတတသုံးသပ်ခြင်း (objective) ဖြစ်ဖို့လိုသည်။ စိတ်လိုက်မာန်ပါ ၀ရုန်းသုန်းကား ပြောဆိုခြင်း (emotional) ထက် စနစ်တကျ အချက်ကျကျ (professional) တင်ပြတတ်ဖို့လည်း လိုသည်။
လုပ်ပိုင်ခွင့်ရှိသော ခေါင်းဆောင်များ စိတ်ထားမှန်ဖို့ လိုသကဲ့သို့ ပြည်သူများမှာလည်း အခြေခံအသိပညာဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်ဖို့လည်း လိုသည်။ သို့မှသာ ဒီမိုကရေစီစနစ် ရှင်သန်ဖို့ အလားအလာများမည်။ သို့မဟုတ်ပါက ...
Posted by Kyaw Htoo Aung at 5:26 PM0comments Links to this post
Posted by Kyaw Htoo Aung at 10:52 PM0comments Links to this post
Posted by Kyaw Htoo Aung at 7:02 PM0comments Links to this post
Posted by Kyaw Htoo Aung at 8:41 PM 1 comments Links to this post
Posted by Kyaw Htoo Aung at 8:26 PM0comments Links to this post
Posted by Kyaw Htoo Aung at 12:23 AM 1 comments Links to this post
Posted by Kyaw Htoo Aung at 3:08 PM0comments Links to this post
Posted by Kyaw Htoo Aung at 1:04 PM 1 comments Links to this post
Posted by Kyaw Htoo Aung at 9:06 AM3comments Links to this post
Posted by Kyaw Htoo Aung at 2:51 PM0comments Links to this post
Posted by Kyaw Htoo Aung at 8:16 PM0comments Links to this post
အထူးအလုပ်ပေး တရားစခန်း Read more...
Posted by Kyaw Htoo Aung at 12:01 AM0comments Links to this post
သမိုင်းရေး မှန်ပါစေ Read more...
Posted by Kyaw Htoo Aung at 11:58 PM0comments Links to this post
ရတနာမာရ်အောင် ဆရာတော် ရွှေရတု အထိမ်းအမှတ် စာစောင်
Posted by Kyaw Htoo Aung at 11:53 PM0comments Links to this post
တောရစံပျော် မြတ်သူတော် Read more...
Posted by Kyaw Htoo Aung at 11:45 PM0comments Links to this post
Posted by Kyaw Htoo Aung at 5:50 PM0comments Links to this post
Posted by Kyaw Htoo Aung at 8:04 PM 1 comments Links to this post
ကမ္ဘာကျော် ယေးလ် တက္ကသိုလ်ကြီးမှ ပို့ချသော သဘာဝပတ်ဝန်းကျင်ဆိုင်ရာ နိုင်ငံရေးနန့် ဥပဒေ အတန်းကို အင်တာနတ်ထက်မှာ အလကား တင်ပီးထားစွာဖြစ်ပါရေ။ အင်္ဂလိပ်စာ အောက်ခံစာတန်းထိုးထားပီးရေ အတွက်ကြောင့်လည်း ကြည့်ရှုနားထောင်သူကို ပိုပြီးကေ နားလည်လွယ်စီဖို့ဖြစ်ပါရေ။ ယင်းပိုင်ပျာယ် တခြား စိတ်ဝင်စားဖွယ် အတန်းတိကိုလည်း လေ့လာသင်ယူနိုင်ပါရေ။ တစ်ယောက်စီအရည်အချင်းမြှင့်မှ လူမျိုးမြှင့်နိုင်ဖို့ ဖြစ်တေအတွက်ကြောင့် ရခိုင်အမျိုးသားအမျိုးသမီးများ လေ့လာနိုင်ဖို့ မျှဝီလိုက်ရပါရေ။ ပို့ချမှုတိကို ကြည့်ရှုဖို့ အေနိန်ရာကိုနှိပ်ပါ။ Read more...
Posted by Kyaw Htoo Aung at 10:06 AM0comments Links to this post
Labels: online classes, သဘာဝပတ်ဝန်းကျင်
Posted by Kyaw Htoo Aung at 7:25 PM0comments Links to this post
အကျွန်ရို့၏ ရက္ခပူရတိုင်းဌာနီကို သမုတ်ထားရေ နာမေတိထဲမှာ သန္တာမြီဆိုစွာလည်း တစ်ခုအပါအ၀င် ဖြစ်တေ။ အကြောင်းမှာ ကီလိုမီတာ ၇၄၀ ရှည်လျားရေ ရခိုင်ကမ်းရိုးတန်းတလျှောက်မှာ သန္တာကျောက်တန်း ကျောက်ပန်းခက်ကြီးတိ တည်ဟိနိန်လို့ပဲဖြစ်ပါရေ။ သင့်တော်ရေ ရာသီဥတု၊ သင့်တော်ရေ ရီအပူချိန်စရေ အရင်းခံသဘာဝတရားတိ ကောင်းမွန်မှုကြောင့် သန္တာကျောက်တန်းတိရေ နှစ်ပေါင်း သန်းနန့်ချီအောင် ကြာညောင်းတည်တံလျှက်ဟိနိန်ခကတ်တေ။ ရခိုင်ပြည်၏ ခေတ်အဆက်ဆက်က မှီခိုအားထားလာကတ်ရရေ ရီထွက်ကုန်လုပ်ငန်းကိုလည်း အကျိုးပြုလာခပါရေ။ ငါး၊ပုစွန်လုပ်ငန်းရေ ဂနိန့်ရခိုင်ပြည်၏ နိုင်ငံခြားဝင်ငွေ ယှာအပီးဆုံး စီးပွားရေးတစ်ခု ဖြစ်တေ။ (ပုစွန်ကန်ဧကဆိုကေ ၉၇-၉၈ ခုနှစ်လောက်က ၅သောင်းကျော်ရာ ဟိခစွာကနိန် ၀၅-၀၆လောက်မှာ ၂ သိန်း ၂ သောင်း ၀န်းကျင်ထိ ဟိလာသည်။) နောင်အနာဂတ်အတွက်လည်း အရေးကြီးရေ စီးပွားရေးအဆောက်အအုံကြီးတစ်ခုလည်း ဖြစ်တေ။ ယင်းအတွက်ကြောင့် ရက္ခသန္တာမြီ၏ သန္တာကျောက်တန်းတိရေ ရခိုင်ပြည်၏ အမြုတေ ရတနာတစ်ခုဖြစ်တေ။
မြောက်ဦးက ဘိုးစိုင်ဘောင်ဆက် ကိုးကွယ်နိန်ရေ ဘုရားကို ဆီးမီးပန်း ကပ်ဖို့ လားခါမှ ရထားလမ်းစီမံကိန်းကြောင့် ဘုရားတစ်ခြမ်းပါလခပျာယ်မှန်း သိခကတ်ရရေပိုင် အဂုတစ်ဖန်လည်း ရခိုင်ပြည်၏ အမြုတေ ရတနာကို ဒိုင်းနမိုက်ခွဲပနာ ဖျက်ဆီးပလိုက်ပျာယ်လတ်။ ငါးတိလည်း အများအပြား သီကတ်ပါရေလတ်။ သန္တာကောင်ချေတိ၏ လုံ့လနန့် နှစ်ပေါင်းများစွာ တည်ဆောက်ထားရေ သန္တာကျောက်စိုင်တိကို ယင်းသူရို့က စက္ကန့်ပိုင်းအတွင်းမှာ ဖျက်ဆီးပလိုက်ကတ်ပါပျာ။ "ဖြစ်ပျက် ဖြစ်ပျက်"လို့ အနိစ္စတရားကို ရှုရဖို့အစား "ဖြစ်လခယာ ပါလခယာ"လို့ရာ ရှုမှတ်ကတ်ရဖို့ပျာယ်လာ။ မဖြစ်ခင် မသိရရေ ဘ၀၊ မပြောချင် ဂျောင်ထိုးခံထားရရေ ဘ၀၊ မဖြစ်ခင် တားပိုင်ခွင့်မဟိရေ ဘ၀၊ ဖြစ်ပျက်ပြီးကေလေ့ ဇာလောက် ဖြစ်ပျက်လားခလဲ မသိရရေ ဘ၀။
နိုင်ငံခြားကော်ပိုရေးရှင်းတိ၏ တိုက်ရိုက်ရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှုတိရေ မြှုပ်နှံခြင်းခံရရေ ဒေသအတွက် စီးပွားရေးဆိုင်ရာ အကျိုးရလဒ်တိကို ပေါ်ထွန်းစီနိုင်ရေ အတွက်ကြောင့် ယေဘုယျအားဖြင့်ဆိုကေ ကြိုဆိုသင့်စွာတော့ အမှန်ပါရာ။ ယေကေလေ့ အဂုပိုင် စနစ်ဆိုး စနစ်ပျက်ကြောင့် ကိုယ့်ပြည်အတွက် အကျိုးမဟိရေအပြင် စီးပွားရေးဆိုင်ရာ၊ သဘာဝပတ်ဝန်းကျင်ဆိုင်ရာ ဆုံးရှုံးမှုတိကိုရာ ရခိုင်သားတိမှာ လက်ဝယ်ပိုက်ကတ်ရပါရေ။ ကိုယ့်ပြည်က သဘာဝဓာတ်ငွေ့ထွက်ယင့်သားနန့် ဖွဲခွံလောင်စာနန့် မီးထွန်းကတ်ရဖို့အနေအထားကို ရောက်နိန်ကတ်ပါပျာယ်။ (ယင်းချင့်တောင် ရက်တိုင်း၊ နေရာတိုင်း ရကတ်ဖို့မဟုတ်ပဲနန့် ကျေးဇူးကြီးလှပါပေတယ် သမ္မတကြီးရေ ဆိုပြီးကေ ထိုင်ရှိခိုးခိုင်းဖို့သိယေ။)
တရုတ်တိ တည်ဆောက်နိန်ရေ စီမံကိန်းတိမှာ ရီနံသန့်စင်ရေးစက်ရုံ၊ ဓာတုဗေဒစက်ရုံတိကလည်း ပါနိန်ရေ။ ယင်းချင့်တိက ရခိုင့်သဘာဝပတ်ဝန်းကျင်အတွက် အထူးစိုရိမ်စရာပါ။ နဂိုကတည်းက စီးပွားရေးနန့် ပတ်သက်လာကေ ဇာတစ်ခုကိုလေ့ ဂရုမစိုက်ဆိုပြီးကေ နာမေကြီးရေ တရုတ်ကုမ်ပဏီတိနန့် မိမိအာဏာမြဲရေးနန့် ပတ်သက်လာကေ ဇာတစ်ခုကိုလေ့ ဂရုမစိုက်တေ နအဖရို့၏ အကြင်လင်မယားဇာတ်ကြောင့် ရခိုင့်သဘာဝပတ်ဝန်းကျင်ရေ ငါးပါးမကလို့ အပါးငါးရာတောင် မှောက်လားနိုင်ရေ။
အရှေ့အလယ်ပိုင်းက လာလတ်တေ ရီနံတင် သင်္ဘောတိ ရခိုင်ပြည်ကမ်းရိုးတန်းနားမှာ ယိုကျလားရေ မှောက်လားရေ ဆိုဂေ ဇာဖြစ်လားဖို့လဲ။ ရီနံတင်သင်္ဘောကနိန် ပိုက်လိုင်းကို အပြောင်းမှာ ယိုကျလားကေ ဇာပိုင်လုပ်ဖို့လဲ။ အနောက်တောင်မုတ်သန်လီ ဆိုင်ကလုန်းဝင်ရောက်မှုကြောင့် ရီနံနန့် တခြား ဓာတ်တုပစ္စည်းတင် သင်္ဘောတိ မှောက်လားကေ သူရို့ ဇာလုပ်ကတ်ဖို့လဲ။ ရီနံသန့်စင် စက်ရုံက ထွက်ဟိလာဖို့ အညစ်အကြေးတိကို ဇာကို သွန်ချကတ်ဖို့လဲ။ ဓာတုအညစ်ကြေးတိကိုဝါ ဇာပိုင်ကိုင်တွယ်ကတ်ဖို့လဲ။ အေလောက် ဥပဒေတင်းကြပ်တေ အမေရိကမှာတောင် ပြီးခရေ နှစ်ထဲက မက္ကဆီကို ပင်လယ်ကွေ့မှာ ရီနံတူးစင်ပေါက်ကွဲမှုကြောင့် ရီနံယိုဖိတ်လို့ ဘီလီလျံပေါင်းများစွာ ဆုံးရှုံးကတ်ရပါရေ။ သားငါးတိရိစ္ဆာန်ပေါင်းများစွာ သီဆုံးကတ်ရပါရေ။ ပုစွန်လုပ်ငန်း၊ ငါးလုပ်ငန်းတိကို အကြီးအကျယ် ဂယက်ရိုက်ခတ်လားရေ။ ယင်း၏အကျိုးယုတ်တိကို နောက်နှစ်ပေါင်းများစွာ ခံကတ်ရဖို့သိဖြစ်တေ။
တရုတ်နိုင်ငံမှာဆိုကေ ပိုတောင် ဆိုးသိရေ။ နှစ်တိုင်း ရီနံယိုဖိတ်မှုတိ တပုံတခေါင်းကြီး။ ပြီးခရေ နှစ် (၂၀၁၀) ဇွန်လက တရုတ်ပြည်၏ အရှေ့မြောက်ဘက်မှာ ဟိရေ ဒဲလ်လီယံလို့ခေါ်ရေ ပင်လယ်ဆိပ်ကမ်းမှာ ရီနံယိုဖိတ်ခရေ။ ရီနံတင်သင်္ဘောကနိန် ပိုက်လိုင်းကို အပြောင်းမှာ ပိုက်လိုင်းနှစ်လိုင်း ပေါက်ကွဲလို့ ရီနံဆီ စည်ပေါင်း ၄သိန်းကျော် ယိုကျလားရေ။ စတုရန်းကီလိုမီတာ ၄၃၀ ကျော်ရေ ပင်လယ်ရီမျက်နှာပြင်ရေ ရီနံဆီတိနန့် ပြန့်ကြဲ ညစ်ပတ်လားရေ။ ယင်းပိုင်ရခိုင်ပြည်မှာလည်း ဖြစ်ဖို့လို့ ပြောလို့ရရေ။ ဇာခါဖြစ်ဖို့လဲရာ စောင့်ကြည့်ရဖို့။ ယင်းပိုင်ဖြစ်ကေ၀ါ။ ခံရဖို့စွာက ရခိုင်သားတိ။ ခံရဖို့စွာက ရခိုင်ပြည်၏ သန္တာကောင်တိ၊ သားငါးပုစွန်တိ၊ လမုတောတိ၊ အကျိုးမြီတိ (wetlands)စရေ သဘာဝပတ်ဝန်းကျင်တိ။ ယင်းနစ်နာမှုတိ၊ နှစ်ပေါင်းတာရှည်နိုင်ရေ ဆုံးရှုံးမှုအတွက်ကလေ့ နစ်နစ်ကြေးရဖို့လမ်းကလည်း မမြင်။ ကျောက်ဖြူက တရုတ်လုပ်ငန်းခွင်တစ်ခုမှာ ကားတိုက်ခံရလို့ ဆေးရုံတင်ရရေ မိန်းမတစ်ယောက်ကို မသဒ္ဒါရီစာ ကျပ် ၂၀၀၀ ရာ နစ်နာကြေးပီးရေလတ်။
1. National Oceanic and Atmospheric Administration, Coral 101, http://coralreef.noaa.gov/aboutcorals/coral101/, accessed on May 22, 2011.
2. Food and Agriculture Organization of the United Nations, Myanmar - Mission Report on Coastal Aquaculture, http://www.fao.org/docrep/004/ad497e/ad497e05.htm, accessed on May 22, 2011.
3. The Boston Globe, Oil Spill in Dalian, China, http://www.boston.com/bigpicture/2010/07/oil_spill_in_dalian_china.html, accessed on May 22, 2011.
4. Mya Than Tun, Dr. Yin Yin Moe, Soe Hla, Update Fisheries Information, Environment and Overview, http://iwlearn.net/iw-projects/Fsp_112799469247/reports/IWS-14%20Country%20Report%20-%20Myanmar.pdf, accessed on May 23, 2011.
5. Narinjara, ဂတ်စ်ပိုက်လိုင်းတည်ဆောက်ရာတွင် ဒိုင်းနမိုက်ဖြင့် ကျောက်ဆောင်များကို ဖြိုချနေသဖြင့် ရေနေသတ္တ၀ါများ သေဆုံးနေ, http://www.narinjara.com/detailsbur.asp?id=3180, accessed on May 22, 2011.
6. Narinjara, ကားတိုက်ခံရ၍ ဆေးရုံတင်ရသူ အမျိုးသမီးကို တရုတ်ကုမ်ပဏီက ငွေ ၂၀၀၀ သာ လျော်ကြေးပေး, http://www.narinjara.com/detailsbur.asp?id=3171, accessed on May 22, 2011.
Posted by Kyaw Htoo Aung at 7:53 PM0comments Links to this post
တပတ်လုံးလုံး ယင်းသူရို့ကြောင့် မှောင်မှိုင်းပြီးကေ နိန်လို့မကောင်း။
ပတ်ဝန်းကျင်ကလည်း နီရောင်ခြည်တိနန့် စိုစွတ်လို့။
အစိမ်းရောင်တိကလည်း အားလုံးကို နီရာယူလို့။
မိုးရွာထားလို့ ဖြစ်နိန်ရေ အိမ်ရိက ပန်းမွေ့ယာကို နင်းလျှောက်လာယင်းနန့်...
"အဝေး.. တစိက မမှန်"
တော်သိရေ။ အနားမှာ လူမဟိလို့။
အမှန်တကယ်ဖြစ်သင့်စွာက အိမ်ရိက လမ်းက ငါအိပ်တေ ကြမ်းခင်းပိုင် မာတောင့်နိန်ရဖို့စွာ။
အပင်စိမ်းတိကိုလည်း အကျွန် မကျေနပ်။
နီရောင်ခြည်ကိုလည်း အကျွန် မကျေနပ်။
ဇာဖြစ်လို့ ပိုတိုဆင်းသစ်ဆစ် လုပ်ပီးနိန်ရလေ။
အစိမ်းရောင်တိက အားလုံးကို နိန်ရာယူလို့။
ဇာဖြစ်လို့ အစိမ်းရောင်တိကိုပဲ ဖန်တီးပီးနိန်ရလေ။
ခြီလှမ်းတိကို ကကျယ်လှမ်းယင်းနန့် ကမူးကရူး လားနိန်မိရေ။
အေနိန့် ဗိုလ်လောင်းသင်တန်းကျောင်း ဖောင်ပိတ်ဖို့။ ။
အကို့စာတိက နည်းနည်း လလီးချေ ခံပါရေ ဆိုရေ ဘော်ဒါတိအတွက် အသစ်ချေတစ်ပုဒ်ကို စမ်းကြည့်လိုက်ပါယင့်။ Feedback ပီးရေအတွက် ကျေးဇူးတင်ပါရေ။
Posted by Kyaw Htoo Aung at 5:04 PM0comments Links to this post